Home Wararka Gudaha Daawo:- Muqaal”Yaasiin Farey oo ka hadlay kiiskii Ikraan Tahliil iyo arrimo kale...
Daawo:- Muqaal”Yaasiin Farey oo ka hadlay kiiskii Ikraan Tahliil iyo arrimo kale oo xasaasi ah
Ku-simihii hore ee hey’adda nabad sugidda iyo sirdoonka Qaranka ee NISA, Xildhibaan Yaasiin Farey ayaa markii ugu horeysay bixiyey wareysi uu qeybo ka mid ah uga hadlay kiiska dilkii Ikraan Tahliil Faarax oo maqan mudo ku dhow hal sano.
Yaasiin Farey ayaa ku adkeystay in Ikraan Tahliil ay dileen Al-Shabaab, isagoo sheegay in arrintaas ay ku ogaadeen baaritaan uu sameeyey intii uu ahaa Taliyaha NISA ee gobolka Banaadir.
Wuxuu sheegay in markii Ikraan la waayey uu taliye ka ahaa nabad sugidda gobolka Banaadir, halka Fahad Yaasiina uu dalka ka maqnaa sida uu sheegay, kadibna isaga loo xil-saaray in kiiska Ikraan uu baaro.
Sidoo kale Yaasiin Farey ayaa ku celceliyey in kiiska Ikraan Tahliil la siyaasadeeyey, balse faylalka baaritaankii la sameeyey ay yaallaan xarunta NISA iyo maxkamadda ciidamada oo ay ku wareejiyeen.
Sidoo kale Xildhibaan Yaasiin Farey oo wareysigaan siiyey TV-ga SMS ayaa ka hadlay ciidamada tababarka loogu qaaday dalka Eritrea, kuwaas oo uu sheegay in faahfaahin badan uusan ka heyn, markii laga reebo in dalka ay tababar ugu maqan yihiin.
Waxaan ciidamada qaranka ku soo dhex jiray 13 sano oo dalkaan waan u soo dakanoobay, hadda waxaan ku biiray baarlamaanka, waxaan soo noqday taliye degmo, taliya qeybta gobolka Banaadir ee NISA iyo Taliyaha guud ee hey’adda NISA, weligey gacanteyda, amar aan bixiyey ama aan ogahay, laguma dhibaateyn qof Soomaaliyeed, waxaana dalbanayaa cafis guud,” ayuu yiri Yaasiin Farey.
Sidoo kale wuxuu sheegay in qof kasta oo wax ka tirsanaya uu lasoo wadaagi karo, isagoo cafiyey qof kasta oo wax uusan egysan ku eedeeyey ama ku nabay, haatan wuxuu sheegay inuu xoogga saari doono dhanka hagaajinta shuruucda dalka, maadaama uu noqday xildhibaan, isagoo mid mid ugu mahad celiyey saraakiishii lasoo shaqeysay waayihii dambe
Previous articleBooliiska wadanka South Africa ayaa qabtay maanta wiil yar isagoo waxal xadaya
Next articleSiyaasi Abdiaziz Hassan Amalow yiri Dagaalka social media ka socdo oo ka dhexeeya madaxweynihii looga adkaaday doorashada iyo Madaxweynihii ku guuleystay
Dubbe: “$60: kun oo ku bixi jirtay bullalayrka la ridi jiray,...
Beesha Caalamka oo cadaadis la xiriira doorashooyinka saartay Madaxweynaha Somaliland
Ciidamada dalka Sudan ayaa weerar ballaaran ku qaaday Ciidamada Itoobiya oo...